विहिबार बेलायतमा मध्यावधि निर्वाचन : के होला ब्रेक्जिट ?
ब्रेक्जिटमा कायम ठूलो अन्योल र अलमललाई हटाएर यो निर्वाचनले ठोस दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा छ । हुन त राजनीतिक दलहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आकर्षक प्रतिबद्धताहरु अघि सारेका छन् । तर निर्वाचनको केन्द्रमा ब्रेक्जिट छ । विस्तृतमा
मिस वर्ल्डको शीर्ष ४० मा मिस नेपाल अनुष्का पनि
आईएनईए अवार्डको तयारीमा ह्याब अ मोमेन्ट, के हो यो अवार्ड ?
'उल्टा सुल्टा इन्टेक' को ५० औं वर्षगाँठ
एनआरएनए यूकेमा मनोनित भए ५ कोअप सदस्य, प्रवक्तामा रामकुमार
बेलायत आउँदै 'छ माया छपक्कै'
बेलायत विशेषः बेलायती चुनावअघि दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप, ब्रेक्जिट नै मुख्य मुद्दा
ट्रम्पको बेलायत भ्रमण : राज्यको स्वागत, जनताको विरोध
लण्डन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायतको राजकीय भ्रमण पूरा गरी फर्किएका छन् । तीन दिने भ्रमणका लागि सोमबार बिहान लण्डन आइपुगेका उनी बुधबार दिउँसो बेलायतबाट आयरल्याण्डतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
भट्टराई एनआरएन यूके कोषाध्यक्षका दाबेदार
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) यूकेको आगामी निर्वाचनमा युवा व्यवसायी तिलक भट्टराईले कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
नेपाल, अष्ट्रेलिया र युकेका प्रधानमन्त्री लगायत सांसदहरुको तलब कति ?
एजेन्सी । विश्वका अधिकांश देशहरुमा सांसदको तलबलाई लिएर बहस हुने गरेको छ । केही विवादित नै छन् भने कुनै देशको सरकारले सांसदको तलबलाई निकै गम्भिरताका साथ लिदैँ आइरहेको छ ।
सत्याग्रह आन्दोलन अराजक : गेसो, सत्याग्रह भन्छ 'भ्रामक टिप्पणी'
लण्डन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणको संघारमा भूतपूर्व गोर्खाका दुई प्रमुख संगठनहरुबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।
बेलायतमा 'ए मेरो हजुर ३', काटियो ५१ औं दिनको केक
चलचित्र हेर्ने अधिकांश दर्शकले स्तरीय र पुर्ण मनोरञ्जनात्मक भन्दै रुचाएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समयबेलायतमा हुने नेपाली चलचित्रका शोहरुमा दर्शक घट्दै गएको भएपनि 'ए मेरो हजुर ३' भने दर्शक तान्न सफल रह्यो ।
लण्डनमा ३ दर्जन स्रष्टाले सुनाए वातावरण कविता
कार्यक्रममा बेलायतबासी तीन दर्जन स्रष्टाले वातावरण कविता वाचन गरेका थिए । जसमध्ये उत्कृष्ट चुिनएको सिर्जनाको लागि कवयित्री अहिल्या सुवाललाई लालीगुराँस फूल र प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरिएको थियो ।
विरोधका बीच लन्डन आइपुगे ट्रम्प, रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत
लन्डन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेलायतको तीन दिने राजकीय भ्रमणका सिलसिलामा लन्डन आइपुगेका छन् ।
बेलायतको राजकीय भ्रमणमा आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
साँझ महारानी एलिजावेथले राष्ट्रपति ट्रम्प दम्पतिको स्वागतका लागि बकिंगहम प्यालेसमा एक रिसेप्सन दिंदैछिन् । तर विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिन, लिबरेल डेमोक्रयाट पार्टीका नेता सर भिन्स केबल, सभामुख जोन बक्र्यू लगायतले उक्त समारोह बहिष्कार गर्ने भएका छन् ।
बेलायत भ्रमणमा आउँदै प्रम ओली
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली बेलायत आउने भएका हुन् ।सन् २००२ मा सम्पन्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण नै नेपालका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो बेलायत भ्रमण हो ।
गुल्मी जिल्ला समाज यूकेमा बुझबुझारथ र सल्लाहकारको स्वागत
लण्डनको ग्रीनवीचस्थित माउन्टेन भ्यू रेष्टुरेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा समाजका तर्फबाट अध्यक्ष टोप पल्लीले नवनियुक्त सल्लाहकारहरुलाई खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।